Ukuqina kwedijithali okuMiselweyo (uSludge Concentration) abavelisi benzeleli kunye nababoneleli - China Izinto eziXhomekeke kwidijithali eziDibeneyo (uSludge Concentration)
Izinto eziQinisekisiweyo eziDityanisiweyo zedijithali (uSludge concentration) woluvo
Umgaqo woluvo lwendlu yoxinaniso lusekwe kukudityaniswa kwe-infrared edibeneyo kunye nendlela yokukhanya ethe saa. Indlela ye-ISO7027 inokusetyenziselwa ukuqhubeka nangokuchanekileyo ukumisela uxinzelelo lwedaka. Ngokwe-ISO7027 itekhnoloji yokukhanya esasaza kabini engachaphazeleka yichromaticity ukumisela ixabiso lendlu yoxinaniso. Umsebenzi wokucoca ngokwakho unokukhethwa ngokwemeko yokusetyenziswa. Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; Ukufakwa okulula kunye nokulinganisa.
Izinto eziQinisekisiweyo eziDityanisiweyo zedijithali (uSludge concentration) Isenzi esinokucoca ngokuzenzekelayo
Umgaqo wokuQiniswa okuQinisiweyo (ugxininiso lweSludge) usekwe kukudityaniswa kwe-infrared edibeneyo kunye nendlela yokukhanya ethe saa. Indlela ye-ISO7027 inokusetyenziselwa ukuqhubeka nangokuchanekileyo ukumisela uxinzelelo lwedaka. Ngokwe-ISO7027 itekhnoloji yokukhanya esasaza kabini engachaphazeleka yichromaticity ukumisela ixabiso lendlu yoxinaniso. Umsebenzi wokucoca ngokwakho unokukhethwa ngokwemeko yokusetyenziswa. Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; Ukufakwa okulula kunye nokulinganisa.
Ph woluvo Electrode, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll, Isilumko sokuSebenza kweTitanium,